Kuwayt - Wikipedia
Kuwayt دولة الكوي
Caasimada Magaalada Kuwayt
- Amiir Sabaax Al-Axmad Al-Jabar Al-Sabaax
- Ra'iisul wasaare Naasir Maxamed Al-Axmed Al-Sabaax
- Taariikhda 1613
- Total ,17,820 km2 km²
6,880 sq mi sq mi
- Biyo (%) Micno la'aan
- 2010 qiyaas 3,566,437 2
- Total $0.118 trillion
- Per capita $27,550
Kuwayt ama Dowladda Kuwayt (Af-Carabi دولة الكوي) waa wadan yar oo ku yaala Bariga Dhexe dhinaca Gacanka Faarsiga. Kuwayt waxee xuduud la leedahay wadamada Ciraaq iyo Sacuudi carabiya. Wadankaan waa wadan aad u taajirsan oo saliid aad u badan leh.bedka uu wadankani ku fadhiyaa waa 17,818 km2, dadka kunooli waxa ay gadhayaan 3 milyan oo qof . waa xubin kamida Jaamacada Carabta waxa kale oo kuwayt ay kamidtahay aasaasayaashii Golaha Iskaashiga gcanka waxa kale oo ay katirsantahay Ururka Islamka iyo Qaramada Midoobay kuwayt waa mid kamida wadamada saliida soo saara ee ku bahoobay ururka OPEC Kuwait (/ kʊweɪt / (ku dhawaad ​​codka dhegeysanaya);   Carabi: الكويت al-Kuwait, Gulf Carabi: [ɪl‿ɪkweːt] ama [lɪkweːt]), si rasmi ah State of Kuwait (carabi: dollar الكويت Ku saabsan sanadkaan Dawlat al-Kuwait), waa wadan ku yaal galbeedka Aasiya. Waxaa ku yaal waqooyiga geeska waqooyiga Carabta ee u dhaxeeya cirifka Gacanka Carbeed, waxa ay la wadaagaan xudduudaha Ciraaq iyo Sacuudi Carabiya. Ilaa 2016, Kuwait waxaa ku nool dad gaaraya 4.2 milyan oo qof; 1.3 milyan waa Kuwai iyo 2.9 milyan oo qof ayaa u dhoofaya.  Dhaqdhaqaaqyadu waxay tiriyaan 70% dadweynaha. 
Kaydka shidaalka waxaa laga helay qadar ganacsi 1938-kii. Laga soo bilaabo 1946 ilaa 1982, waddanku wuxuu soo maray casriyeyn ballaadhan. Sanadihii 1980-meeyadii, Kuwait waxay soo mareen mudaharaad deganaansho juquraafi ah iyo dhibaatooyin dhaqaale kadib markii shilalka suuqa saamiyada. Sanadkii 1990-kii, Kuwait waxaa la soo weeraray, kadibna dib loo dhigay, by Saddam Ciraaq. Shaqada Ciraaq ee Kuwait ayaa dhammaadkii sanadkii la soo dhaafay ka dib markii ay millatari soo faragalisay by isbahaysiga milatari ee uu hogaamiyo Maraykanka. Kuwait waa asxaab ka mid ah kuwa ugu muhiimsan ee aan ka tirsanayn NATO. Kuwait sidoo kale waa asxaha ugu weyn ee ASEAN, iyada oo la sii wadayo xiriir adag oo lala leeyahay Shiinaha.   
3 Waddanmaha Deggan kuwait
5 Calanka Dhaw
Kuwait waa dawlad dastuuri ah oo leh nidaam siyaasadeed oo semi-demoqraadi ah. Kuwait waxay leedahay dhaqaale dakhligoodu sarreeyo oo ay taageerayaan kaydka lixaad ee ugu weyn caalamka. Diinta Kuwait waa lacagta ugu qiimaha badan adduunka.  Sida laga soo xigtay Bangiga Adduunka, waddanku wuxuu leeyahay dakhliga afraad ee ugu sarreeya dunida oo dhan. Dastuurka waxaa la daabacay 1962.    Kuwait waxay hoy u tahay guriga ugu wayn ee bariga dhexe. Degmada Kuwait ee Degmooyinka Dhaqanka waa xubin ka mid ah Shabakadaha Dhaqanka ee Caalamiga ah  Kuwait ayaa si weyn loo tixgeliyaa "Hollywood-ka Gacanka" sababtoo ah sumcadda qalliinka iyo masraxa.
Sanadkii 1613, magaalada Kuwait waxaa aasaasay Kuwait City casriga ah. Sanadkii 1716, Bani Utub waxay degeen Kuwait, oo waqtigaan deganaa kalluumeysato yar waxaana ugu horreyntii ka shaqayn jiray tuulo kalluumeysi ah.  Qarnigii siddeedaad, Kuwait way ku baraarugeen isla markaana si deg-deg ah u noqotay xarunta ganacsiga ee ugu weyn ee u dhexeeysa Hindiya, Muscat, Ciraaq iyo Carabta.   Markii la gaaro 1700-meeyadii, Kuwait waxay horay u sameysey waddo weyn oo ganacsi oo ka timid Gacanka Khaliijka ilaa Aleppo. 
Intii lagu guda jiray hareereeynta reer galbeedka ee Basra ee 1775-79, ganacsatada Ciraaq ayaa ku qulqulay Kuwait waxaana ay qayb ahaan ka mid ahaayeen qalabeynta ballaarinta dhismaha doonyaha Kuwait iyo hawlaha ganacsiga. Natiijada, ganacsiga bada ee Kuwait ayaa kor u kacay,  sida wadooyinka ganacsiga ee Hindiya ee Baqdaad, Aleppo, Smyrna iyo Constantinople loo rogay Kuwait wakhtigan.  Shirkadda East India waxaa loo wareejiyay Kuwait 1792.  Shirkadda Bariga Hindiya waxay hubisay waddooyinka badda ee Kuwait, Hindiya iyo xeebaha Bariga Afrika.  Ka dib markii Faaris ay ka baxeen Basra sanadkii 1779, Kuwait ayaa sii waday inay soo jiidato ganacsiga ka baxsan Basra. 
Waddanmaha Deggan kuwaitEdit
Kuwait wuxuu ahaa xarun dhisme doon ah oo ku taal gobolka Khaliijka Persian.   Dhamaadkii siddeedaad iyo qarnigii sagaalaad, maraakiibta laga sameeyay Kuwait waxay wadeen dhaqdhaqaaq ganacsi u dhexeeya dekadaha Hindiya, Bariga Afrika iyo Badda Cas. 29  Markab maraakiib ah oo Kuwaiti ah ayaa lagu caanbaxay Badweynta Hindiya.  Duufaan goboleed ayaa ka caawiyay barwaaqada dhaqaalaha ee Kuwait qeybtii labaad ee qarnigii 18aad.  Waxaa laga yaabaa in kaniisada ugu badan ee Kuwait ay noqoto mid barwaaqo ah ay sabab u tahay xasiloonida Basra ee qarnigii 18aad.  Dabayaaqadii qarnigii 18aad, Kuwait qayb ahaan waxay u shaqeynayeen sidii ganacsato Basra ah, kuwaas oo ka cararaya cadaadiska dawladda Ottoman.  Kuwai wuxuu hormood u ahaa sumcaddii ugu badneyd ee ku jirta Gacanka Ciraaq.
Sheekhumkii Kuwait wuxuu noqday 1899 (ilaa 1961) ka dib markii Heshiiskii Anglo-Kuwaiti ee 1899 lagu saxiixay Sheekh Mubaar Al-Sabah iyo xukuumadda Ingiriiska ee Hindiya sababo khatar ah oo ku aaddan xornimadii madax-banaanida Boqortooyada Boqortooyada
Magaalada kuwayt waxa la aasaasay sanadkii 1613 waxa ay ahayd goob aganacsi oo aad u wayn wadankana waxa loogu magacdaray Magaalda Kuwayd ee caasimada ah Calanka kuwayt waxa markii ugu horaysay sare loo taagay 24-11-1961 kadib markii uu mudo isbed bedelayay oo marba nooc laga dhigayay ayaa sanadii 1961 lasameeyay calankan hada ay kuwayd caanka kutahay
↑ Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named alb
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Kuwayt&oldid=216778"
Last edited on 14 Sebteembar 2021, at 07:56
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 14 Sebteembar 2021, marka ee eheed 07:56.